०४६ सालमा व्यवस्था फेरियो, नागरिकता थपिए र ०४८ मा जनगणना भयो । ०५६ मा निर्वाचन भयो । तराइमा निर्वाचन क्षेत्र थपिए । ०६४/६५ मा नागरिकता थपिए र त्यतिबेला नै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाईनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गरियो । ०६८ मा जनगणना भयो । ०७८ मा संसद भङ्ग गर्ने र मधेसको उग्रबिरोधी भनिएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही ओली विरोधी समूहले नै जोगाइ दियो र सरकारमा सामेल भयो । यसैवर्ष नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याइयाे । यसैपाली जनगणना पनि छ । फेरि ०७९ मा निर्वाचन भनिएको छ। गर्न खोजेको केहो, प्रस्ट छैन र ?
मलाई गोरु नाङ्गो हिँड्दा पनि लाज लाग्थ्यो । तर हाम्रा प्रमलाई देखेको दिनबाट गोरुलाई नाङगै देख्दा पनि लाज लाग्न छोड्यो ।
नाङ्गै हिड्दा पनि कहाॅ नाङ्गिनु ? छालाले शरीर ढाकेको छ नी भन्दै ताली तर्क दिनेलाई ओली बा भनिन्छ ।
एक्लो बा मात्रै हुँदा त स्यालहरू त्यसरी ऊचालिने र पछारिने गर्थे । अब त हजुरबा (मोदी) ठूलो बा (ठाकुर) काका (राजेन्द्र) पनि पाए ! अब कती ऊफ्रिने होला !
नेपालीको हात-मुख बन्द गराउने नाकाबन्दीजस्तो “महान क्रान्ती” सफल पार्न तपाईँका सहयोगी राजेन्द्र महतो बसेको सुनौलीको खास स्थानमा त्यो ईतिहास झल्किने स्टाच्यू बनाउनुस् ।
बकम्फुसे स्यालहरू हो ! तिम्रा अवैध बाले गरेको रास्ट्रघातको पक्षमा बोलेर सामाजिक सञ्जाल फोहोर नगर । एकछिन भएपनी लस्ज मान र मुख छोप ।
कामचलाउ सरकारको मन्त्रीपरिषद विस्तार लजास्पद । नश्लवादीहरुको गठजोड ! भारतीय र आदित्यनाथ को मोर्चा ! प्रष्ट छ- नक्कली मन्डले रास्ट्रवाद ।
मैले भन्दै आएको हुँ- ओलीकै मीलोमतोमा भारतले नेपाल विरूद्द नाका बन्दी लादेको हो । अब त बुझ्नुस् ।
घृणा गर्छु तपाँइ ओलीजस्तो रास्ट्रघातिको हातमा नेपालको झन्डा हुनुमा ।
हरेक नेपाली कुनै न कुनै पाटीमाथि आस्था राखेकै हुन्छ । तर आफ्नो दलको नेता भन्दैमा रास्ट्रघातलाई पनि महान कस्म भन्नू त दिसालाई क्या मिठो भन्नु हो । लाज मान साथी हो ।
भारतीयलाई नेपाल बुझाएको कुरा छर्लङ्ग भयो ।
राजनीतिलाई पेसा बनाएर र एउटा सिङ्गो देशलाई बहुराष्ट्र घोषणा गर्ने मुद्दा बोकेकाहरूलाई सत्तामा लैजाने धुर्त, कपटी केपि ओलिलाई भन्दा राजालाई देशको माया हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली भारतको “गोटी” बनिरहेका छन् : माधव नेपाल ।
नाकाबन्दी के पी ओली टीम र राजेन्द्र महतो टिमको पहिलादेखि कै ग्रान्ड डिजाइन रहेछ भन्ने अहिले प्रष्ट देखिएको छ । बिचरा हामी जनता भेडा ।
मन्त्री बनेर पनि केही कमाउन सकिएन’ प्रतिप ज्ञवाली ।
जो चोर उसकै ठूलो स्वर !आफै राष्ट्रघाती र देश बेचुवा भएपछी हामीले खोज्न कता जाने । राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारिलाई टुँडिखेलमा झुन्ड्याने पर्छ ।
अब कसको के लाग्छ र ! प्रो-इन्डियन र इन्डियनहरुले शासन सत्ता कब्जा गरेपछि देश टुक्र्याउने त हो नि!
“प्रचण्डजीले संरक्षण गरेको चुरे ओलीले सखाप पार्दै छन् ।” पूर्व रास्ट्रपती ।
पार्टीका झोलेहरुले आफ्नो नेताले गरेको नराम्रो कामलाइ पनि संरक्षण गर्ने र जे गरेनी राम्रो हो भन्नाले नै नेता नसुध्रेका हुन। सत्य र तत्य बुझेर समर्थन र बिरोध गरौँ ।
संसदिय व्ययबस्था नेपालमा नफाप्ने नै हो त?
यो संसदिय व्यवस्था को खेलमा ईमान र अनुसाशासन भित्र रहेर राष्ट्रिय खेलाडीले मात्र खेल्ने नियम आवश्यक भो।
ओली ले चुरे मात्र हो र संविधान पनि समाप्त गर्दै छन् ।
राष्ट्रघाती याे सरकार १ मिनेट पनि सत्तामा रहनु देश र जनताको लागि महंगो हुनेछ । राष्ट्रघाती सरकार मुर्दावाद !
केपि वलीको राष्ट्रवाद राजेन्द्र महतोले लाको धोती जस्तै सफा रैछ । त्यो प्रदैन हि हि हि ।
केहि थान मान्छे कमेन्टमा ओलिमा नैतिकता खोज्दैछ्न! जनताप्रति बफादार भएको नैतिकता खोज्नु मालिकले जे भन्छ् ओलीले त्यहि गर्छ ।
ओलिको राष्ट्रियता अहिले खोजेर हुन्छ २०५३ सालमै बेचेका हुन राष्ट्रियता २०७२ को त एउटा डिजाइन वाला नाटक थियो! यस्ता ग्वाच जे भन्यो त्यहि पत्याइदिने जनता भए को चाहि बन्दैन नक्कली राष्ट्रवादि!
विहान राष्ट्रवादि, रातीवलैनचौरवादीको नाम हो ओली । यता अव्सिफ्ह सन्तानहरू i love you …baa भन्दै ।
खाओ अब राष्ट्रियता, नागरिकता, अनि अब चुरे! सगरमाथा त अस्ति नै दिइ सक्यो भन्नमा अएको थियो । त्यहि यो पालि धेरै भारतीयले नेपालीले चढन पाउने रकममा नै सगरमाथा चढे रे !
झुट र भ्रमको खेती कति साह्रो फस्टाएको साथीहरू। १५ सांसद मध्य १० जनालाई मन्त्री । हैट ! गोजिको फालेर भुईको टिप्ने ?!
हिजाे बाेर्डर घेरेर नेपाली जनतालाई नाकाबन्दी लगाउने र यतावाट धारेहात लगाउनेकाे सक्कली स्टाईकर (Striker) एउटै रहेछ र त्याे राष्टवाद ढाेङ्ग रहेछ ।पर्दा खुल्दै जावस धेरै भ्रममा पनि बाँच्नु हुन्न ।
अब मनाङ्गे, रेशम र महत्तो को छत्रछायाँमा ७ नम्बर गियरमा संविधान च्यात्दै हिँडेपछी तपाईं हरुको संबिधानवाद त स्थापित भइहाल्छ नि।
दुई-तिहाई जनताको कम्युनिस्ट सरकार घटेर एमालेका अहिले ४ मन्त्री मात्र सरकार मा छ्न् । चुनावको आड देखाएर जनतालाई अब बलि नबनाए हुन्छ। जनता चेतनसिल छन् । अब मोदीको हुकुम चल्ने छ । भारतीय व्यापार फस्टाउने छ । नागरीकता सबै भारुमा बिक्ने छ ।
नदीनाला ,संविधान गीटी बालुवा सकियो अब बहुराष्ट्रिय राज्य को सुरुवात गरेछौ जय प्रभु।
कय्है के को संविधानवाद ! सामान्त गाेयलसँग भएको सम्झौता स्थापित भयाे। महन्त पक्ष यही संविधान अनुसार चुनावमा पनि सहभागी भएको होइन र ?
खड्ग ओली मेरो दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन भनेर कुर्लँदा कुर्लँदै बिहारी राजेन्द्र महतोको धोती भित्र मुन्टो घुसार्न पुगे हैन त हनुमान् हो ? राजेन्द्र महतोलाई टट्टीले चापेर लोटा बोकेर बाहिर निस्कने वित्तिकै राजनेताको प्राण जाने भो !
बहू-राष्ट्रीय राज्य सहितको संविधानबाद लागू भयो। बाबू भन्दा पहिला छोराले नागरिकता पाउने ऐन लागू भो । अंगीकृत छोरी नेपाली मन्त्री कानून लागु भो ।
अब देश नै प्रभुलाई बुझाइ दिए भयो त नेताज्यू ।
केपि ओलीको चाकडी गर्ने सुदूरपश्चिमका नस्जायज ठिटाहरुलाई ओलीले सरकार गठनमा खोलेरै देखाई दियो । गर फेरी चाकडि ।
माछो माछो गन्डि भयो ।
अब कसरी पत्त्याउनु कि यहाँ सरकार समाजवाद उन्मुख छ भनेर ?
आज क्याबिनेटमा संसद नै नभएका “लामा” एमाले नै नचिनेका अरु “छोटा” हरुको राज देखेर उदेकलाग्दो छ र अन्याय भएको महसुस हुन्छ !
नाकाबन्दी को बेला नेपाल र नेपालीको दाना पानी बन्द गर्छु भन्नेहरू आज नेपाल सरकार को उप प्रधान मन्त्री !
(साभार : रावलको फेसबुकबाट)